Website ontwerp /
Ichokwadi, mweya wevanhu hausi wema sezvaanoratidzika. Iko nguva dzose yakagadzirira uye kunyange kuda kuzarura zvakavanzika zvayo kumunhu anovimba naye. Semitemo, webhutheni dzemagariro dzine mawebsite mawo ega akazarurirwa kwekutaurirana, hukama hwevanhu uye zvimwe zvinhu zvakadaro. Kunze kwezvo, mawebsite webhupu anoshanda sechirongwa cheCVs chaiyo yevatenzi vavo. Kazhinji kazhinji, kana iwe wakakorodza senyuchi, uchiona webhusaiti yemunhu, iwe unogona kutaurira zviri nyore pamusoro pemuridzi wepaiti pane zvaaida kutaura.
Hostinger yakagovana chirongwa chekutangisa inotanga pa $ 0.80 / mo chete – Yakakwana kune avo vari kutambira imwechete webhusaiti webhusaiti (shanyira Hostinger pamhepo).
Kana uchinge uine nzvimbo yekuchengetedza webhusaiti uye kugadzirira kugadzirira, danho rinotevera nderekuti ita website yacho pachayo.
Pane zvakawanda zvinofungidzirwa mu webdesign asi asi sekutanga mazano angu ndekutora mwana danho.
Edza kubudisa chimwe chinhu uye kuitora pawebhu. Kunyatsogadzirisa uye kugadziridza kunogona kuuya mushure mokunge wadzidza unyanzvi hwako. Imwe nzira iri nyore yekugadzira webhusaiti ndeyokushandisa WYSIWYG web-editor met Adobe Dreamweaver CC. Vatori vakadaro vanoshanda sezwi rinowanzoshandura izwi uye vanokubvumira kuti ugadzire nzvimbo yako yekuona pasina kutarisira zvakawanda zvekodhi.
Website voor bouwers
If HTML neCSS haisi chinhu chako, kana iwe unongoda nyore webhusaiti yega yega yekubvunzurudza kwako, saka zvichida dhizha-uye-drop website builder ndiro sarudzo yakanaka.
Mazhinji makambani ekubata webhu anopa huwandu hwekudonsa-uye-kudonha sosi anovaka mahara. Kana iwe usinei nebasa zvakanyanya nekutaridzika kana UX yenzvimbo, unogona kugadzira webhusaiti yako inoshanda muhafu neawa uchishandisa izvo zvemahara zvishandiso. Neimwe nzira, iwe unogona kuruka iyo webhu dhizaini nekushandisa yakabhadhara ese-mu-one muvaki webhusaiti senge Wix uye Weebly. Chinhu chakanakisa nezve izvi zvishandiso zvakabhadharwa zvakagadzirirwa vasina-techies. Ivo vanowanzo kuve nyore kushandisa uye vanouya nemazana emamwe pre-yakagadzirirwa matemplate. Iwe unogona kungotora pre-dhizaini thema uye woisa kune yako webhusaiti mune mashoma mashoma mashoma.
Kune avo vasina kujairika nemuvaki webhusaiti, ini ndinokurudzira kuverenga idzi tutorials deelvenster yedu saiti masosi:
Ndezvipi zvinofanirwa-zvine ruzivo deelvenster nzvimbo? Jobho anonyora, mashoko okukurukura, zvigadzirwa zvemiti, nezvimwewo.
Pane zvakawanda zvaunogona kusarudza kubva pakuvaka yako webhusaiti yemahara. Wix ine account yemahara iyo inokutendera iwe kushandisa yavo kuvaka webhusaiti, apo 000 Webhost inayo gratis webhosting zviripo.
Chii chandinofanira kuisa ruit yangu webhusaiti?
Kuva newebhusaiti yako pachako kunobatsira hier kuwana basa?
Kuve uine-waitwa-wakanaka, hunyanzvi hwekudyira nhoroondo inozobatsira kuti ubve kunze kwevanokwikwidza kumaforamu ekutora vanhu Kunze kwerusununguko rwekunyatsogadzirisa, uri kuratidzawo kutanga uye hunyyzvazu huzu i hu i hu hu hu hu hu i hu hu hu i hu i hu hu a hu i hu hu a i a i a a a a a i a a a i t a a a i n a a a a a a a a a a pu a a a a a a a a a a pu..
Ndapota shandisai izvi zvinyorwa uye zvaunofunga pamusoro op Twitter (tenga pa @WebHostingJerry). Ndinovimba kuti kuunganidzwa uku kuchakubatsira iwe kuumba yako yega webhusaiti maererano nezvose zvemazuva ano.